DUUFAANNADA TUBE EE TIJAABADA AH WAXAY KU DHASHEEN URAL - MAQAALLO
In Urals, ku dhashey dufanka super-qabaa tube tijaabo ah
Tani waxaa lagu soo waramayaa iskaashatada beeraha ee "Uralplemtsentr", oo heshiis la galay shirkad Canadian ah si looga soo saaro borotiinka caanaha laga helo tube tijaabo ah. Diisambar 26-keedii, ka dib tijaabada, 9 weylood iyo 12 xaglaha ayaa ku dhashey.
Inkasta oo tijaabooyinka la midka ah ee la sameeyey xilligii Sowtiga, haddana waxay doonayaan inay soo nooleeyaan fikraddan si ay u yeeshaan xoolo badan oo waxtar leh oo faa'iido u leh iskaashiga. Sida laga soo xigtay guddoomiyaha beeraha beeraha ee "SPAS" Alexander Popkov, celcelis ahaan hal lo'da Ural wuxuu siinayaa ilaa 6 kun oo litir oo caano ah sannadkii, marka Kanada laga helo hal lo'da ka badan 19 kun litir sannadkii.
Si loo xaqiijiyo faa'iido badan oo ka mid ah lo'da sida, tijaabooyinka ayaa sii wadi doona in lagu fuliyo kuwa ku soo socda iyo saadaashaas waxaa la xaqiijin karaa oo kaliya dhawr sano ka dib.